Cusub Asus Zenwatch 3 wuu ka dhumuc yar yahay, ka dhaqso badan yahay kana wareegsan yahay kuwii ka horeeyay | Wararka IPhone
Asus Zenwatch 3 cusub wuu ka khafiifsan yahay, ka dhaqso badan yahay kana wareegsan yahay kuwii ka horreeyay
Shirkadda Asus waxay ka faa'iideysatay qaab-dhismeedka ay soo bandhigtay IFA ee maalmahan lagu qabtay magaalada Berlin si loogu soo bandhigo jiilka saddexaad ee smartwatch-kiisa lagu baabtiisay magaca Zenwatch 3. Shirkaddu waxay wax ka baraneysay qaladaadkeedii hore waxayna hadda billowday qurux qalab ahaan, bilic ahaan iyo muuqaal ahaanba, waxay si fiican ula tartami kartaa jiilka labaad Moto 360, oo ah wakiilka ugu sarreeya adduunka wareega smartwatches. Asus Zenwatch 3 wuxuu na siinayaa shaashad wareega 1,39-inch ah oo leh xallinta 400 × 400 iyo 287 codsi halkii inch. Sida aad ku aragto sawirka madaxa ka ah qodobkan, waa muuqaal qurux ahaan aad isugu eg, qaab ahaan iyo tirada badhamadaba, jiilka labaad ee Moto 360.
Kiiska qalabkani wuxuu ka samaysan yahay bir iyo Waxaa lagu heli doonaa saddex midab oo kala duwan: madow, lacag iyo dahab dahab ah. Moodooyinka oo dhami waxay dhexgalaan taaj dahab ah oo ka baxsan galaaska, iyagoo siinaya tafaasiil aad loogu riyaaqo kuwa jecel saacadaha, ha ahaadeen gacmo caqli leh ama taariikhi ah.
Qalabkani wuxuu na siinayaa dhumuc dhan 9,95 millimitir, isagoo ka yara khafiifsan kuwa tooska ah ee ay xafiiltamaan; Huawei Watch iyo jiilka labaad ee Moto 360. Gudaha qalabkan waxaan ka helaynaa processor-ka Snapdragon 2100 oo leh 512 MB oo RAM ah iyo 4 GB oo keyd gudaha ah. Dhanka batteriga, Achilles heel ee aaladda noocan ah, waxaan ka helnaa 342 mAh, taas oo sida uu sheegayo soosaaraha aan awoodi doono inaan laba maalmood ku qaadanno adigoon lacag ka qaadin.
Waxay sidoo kale leedahay deg deg deg deg ah oo kuu ogolaanaya inaad ku shubto 60% batteriga qalabka kaliya 15 daqiiqo. Laakiin haddii nolosha batteriga ay yaraan karto, shirkaddu waxay na siisaa dhammaystir aan ku ballaarin karno batteriga illaa 40%. IYOl Asus Zenwatch 3 wuxuu noo ogolaanayaa inaanu astaysto aaladda qalabka ilaa 50 nooc oo kala duwan, dhammaantood waxay ku rakibeen si asal ahaan ah.
Lama shaacin taariikhda la filayo inay ku timaado suuqa Yurub. Haddii aan ka hadalno qiimaha, Asus wuxuu doonayaa inuu si buuxda ugu lug yeesho qalabkan cajiibka ah, iibinta qalabka 229 euro, waa qiime aad u tartan badan gaar ahaan haddii aan barbar dhigno kuwa kula tartamaya ugu badan. Asus ZenWatch 3 waxaa ku shaqeeya Android Wear. Waqtigan xaadirka ah soo saaraha kaliya ee ka soo horjeeda adduunka ee smartwatches waa Samsung oo leh nidaamkeeda hawlgalka u gaarka ah ee Tizen, kaas oo bixiya adeegsiga batari aad uga adag kan Android Wear.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Asus Zenwatch 3 cusub wuu ka khafiifsan yahay, ka dhaqso badan yahay kana wareegsan yahay kuwii ka horreeyay
Waxay umuuqataa mid wanaagsan, aad uxun waa asus ...
RadarGo waa kaliya radar shaqeynaya Pokémon Go oo aan helnay
Apple wuxuu bilaabayaa qorshaha 2TB iCloud ee Muhiimka ah